Hadiyadaha Birta |
Calaamadaha & Calaamadaha Zinc Alloy
Daawaha Zinc waa mid aad u badan oo leh xuduudo yar, marka la barbar dhigo musmaarradii dhaldhalaalka naxaasta, astaamaha daawaha zinc & summadaha ayaa aad waxtar u leh gaar ahaan marka tirada dalabku weyn yahay ama cabbirka pin -ku uu weyn yahay. Wixii baaxad weyn ee sumadda daawaha zinc, way ka khafiifsan kartaa les ...
Soojiidashada Birta Tayada Sare
Miyaad jeceshahay inaad ka dhigto qaar ka mid ah soo jiidashada biraha tayo sare leh qalabkaaga? Fadlan kaalay oo nagu soo biir, Hadiyadaha qurxoon ee dhalaalaya ayaa fulin doona rabitaankeenna waxayna fikraddaada gelin doonaan nolosha dhabta ah. Waxaan kuu soo bandhignay naqshado waaweyn oo furan oo loogu talagalay silsiladaha dhaadheer, jijimooyinka jijimooyinka, jilicsanaanta xayawaanka, qurxinta kirismaska ​​si aad ...
Nooca Cloisonné Lapel Pin & Badge
Calaamadda Cloisonné waxaa sidoo kale loo yaqaannaa sumadda dhaldhalaalka adag, taas oo ah hab dhaqameed aad u badan oo leh taariikh dheer. Waxaa la yiri baajiyaha dhaldhalaalka adag waxaa la keydin karaa 100 sano iyadoon hoos u dhicin maxaa yeelay midabada waxaa laga soo saaray macdanta macdanta waxaana lagu gubay 850 digrii centigrade. Waxaan u isticmaalnaa e ...
Kartida Birta Suunka Suunka
Hadiyadaha Quruxda Badan leh had iyo jeer waxay bixiyaan bilad bir ah oo tayo sare leh, qadaadiic loolan ah, calaamado pin, dhejisyo iyo waliba suumanka suunka caadada u ah. Sidaad ogtahay, suumanka shaqsiyeed ma aha oo kaliya alaabada moodada, laakiin sidoo kale waa hadiyad weyn oo loogu talagalay xusuusta, aruurinta, xuska, dhiirrigelinta, mashquulka ...
Musmaarrada Lapel -ka iyo Baararka
Hadiyadaha Pretty Shiny waxay bixiyaan tiro balaadhan oo tayo sare leh oo biinanka laf -dhabarta ah ee la habeeyay iyo summadaha. Agabyo kala duwan ayaa loo adeegsan karaa in lagu abuuro biin bir ah, oo ay ku jiraan naxaas, naxaas, naxaas, bir, birta zinc, birta birta ah, aluminium, birta aan birta lahayn, birta birta ah, lacagta qaaliga ah iyo kuwo kaloo badan. Dhammaantood waa q ...
Daboolida Custom-ka oo tayo sare leh
Cufflink waa xidhmooyin qurxin ah oo loo xidho si loogu xidho labada dhinac ee marada shaarka. Waxaa loogu talagalay oo kaliya in lagu isticmaalo shaadhadh oo leh godad badhan oo labada dhinac ah laakiin aan lahayn badhanno. Laba ka mid ah cufflink sharaf leh oo moodada leh ayaa ah ikhtiyaarka hadiyadda ee ragga oo muujiya indha -indheynta ...
Astaamaha Baabuurka Birta ama Calaamadaha
Hadiyadaha Pretty Shiny ayaa si fiican loogu yaqaan soo saarista astaamaha caadooyinka ee baabuurta, labadaba astaamaha baabuurta birta ah iyo sidoo kale sumadaha baabuurka ABS. In kasta oo sumadda dahabka birta lagu samayn karo agabyo kala duwan iyo dhammaad, sida naxaas shaabadaysan oo koonto ah, sawir naxaas leh ama dhaldhalaal jilicsan oo aluminium ah, dhinta tuurista zinc al ...
Baraha Lacagta Birta
Waa maxay faa'iidooyinka lacag -goynta lacagta birta ah? Lacagta lacagtu waa qalab sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu kaydiyo lacag caddaan ah iyo kaararka deynta si aad u yar oo loogu talagalay kuwa aan doonayn inay qaataan boorsada jeebka. Guud ahaan waa gabal adag oo bir ah oo isku laabay badh, si biilasha iyo baabuurka deynta ...
Goobaha Koofiyadda Golf -ka oo leh Calaamadee Kubbadda
Marka la eego faa'iidooyinka golf -ka oo ah isboorti ka go'ay bulshada, iyadoo qoysasku u qulqulayaan si ay ugu raaxaystaan ​​baaxadda ballaaran iyo hawo nadiif ah, carruur aad u badan ayaa bilaabay inay baxaan inta lagu jiro cudurka. Haa, agabyada golf -ka ee aadka u fiican oo ay ku jiraan koofiyadda koofiyadu ma aha oo kaliya inay ku raaxaystaan ​​suuq caan ah, laakiin waxay kaloo dhiirrigelisaa oo dhiirrigelisaa ...
Qalab qallafsan oo leh sumadeeyaha kubbadda
Iyada oo laga duulayo sidii loo ilaalin lahaa bulshada, gole kasta waa inuu hubiyaa in dayactirka si sax ah loo fuliyay. In kasta oo aad u adeegsan karto aagga teeing si aad shaqada u qabato, aaladda dayactirka cawsku waa ka waxtar badan tahay. Waa maxay qalabka dayactirka ee loo isticmaalo golf -ka? Dad badan ayaa raba inay ...
Ku qurxin maaskaro leh biinanka Lapel ee la habeeyay
Xitaa iyadoo tallaallada coronavirus ay na soo gaarayaan, laakiin illaa inta masiibada aysan dhammaan, waxaa la soo jeediyay in la xidho maaskaro wajiga si looga gaashaanto COVID inta badan 2021. Marka laga reebo maaskarada qalliinka fudud iyo maaskaro N95, Pretty Shiny ayaa bixin karta maro midab leh waji -xidhka oo leh c ...
SDG Pin Badge
Qaramada Midoobay waxay ka go'an tahay in la gaaro Yoolalka Horumarinta Joogtada ah (SDGs) marka la gaaro sannadka 2030. Horumar waara ayaa ah yool guuraya kaas oo ahaa baaq ku aaddan waxqabad sannadka 2015 dhammaan waddamada si loo tirtiro saboolnimada ba'an, gaajada, ilaalinta meeraha iyo hubinta taas. ..